Tacliin | Radio Himilo
Home / Tacliin
Himilo – Xaliimo Maxamuud Adan waxaa Eebbe u fududeeyey aqrinta Qur’anka, xilli walba oo aysan macduur lahayn ayey jecleshahay inay aqriso kitaabka. Waa arday dhigata Madrasad lagu barto Qur’anka waxay ku jirtaa howlgal ay ku doonayso inaysan kaliya gudaha bisha ...
Ahmed Haaddi March 26, 2022
Himilo – Merrill Pittman Cooper oo ah nin 101 jir ilaa iyo yaraantiisii wuxuu la noolaa riyo ah inuu mar uun wax barto. Ugu dambeyn wuxuu rumeeyay qeyb ahaan damaciisii markii uu iskuulka sare dhameeyay 80 sano kadib. Pittman 1934 ...
Ahmed Haaddi March 23, 2022
Himilo – Sri Lanka ayaa kansashay imtixaanka malaayiin arday ah oo dhigta iskuulada, kaddib markii dalkan uu ka dhamaaday warqadihii daabacaadda sababtoo ah waxaa gabaabsi ah helidda sarifka lacagaha qalaad gudaha caasimadda Colombo oo lagu soo dhoofsan lahaa badeecooyinka. Maamulka ...
La kulan – Ninka carruurtiisa hal fasal wax kula barta
Ahmed Haaddi March 7, 2022
Himilo – Laga yaabee inuu nin weyn yahay. Laakiin kani ma ahan maamule iskuul iyo macalin toona. Waa arday kamid ah ardayda dugsiga hoose iyo dhexe ee degmada. Iskuulka uu dhigtana waa isla midkii ay carruurtiisu dhigan jireen. La kulan ...
Ahmed Haaddi January 20, 2022
Himilo – Khubaro ka tirsan jaamacadda Geneva ayaa u kuur-galay saameynta uu jimicsiga ku leeyahay ka miro dhalinta barashada maadada xisaabta. Cilmi baarista waxaa lagu wareystay 193 arday oo da’ ahaan u dhaxeeya 8 ilaa 12 jir. Waxaa loo dhabbo ...
Ahmed Haaddi January 11, 2022
Himilo – Warbaahinta Hindiya ayaa sheegtay in iskuul ku yaalla gobolka Karnataka ee Koonfur-galbeed uu ardayda Muslimiinta ah u diiday inay galaan fasallada iyagoo xiran xijaabka. Waxayna warbaahintu ka soo xigatay maamulka dugsiga in ay oggolaadeen xirashada xijaabka ama niqaabka ...
Ahmed Haaddi January 10, 2022
Himilo – Toddobaatan sanno kaddib Rene Nera wuxuu markii ugu horreysay iska diiwaan geliyay kulliyad, 88 jirkan ayaa ugu dambeyntii helay shahaadadiisa bishaan, iyadoo ay weheliso inantiisa 23-jirka ah (Melani Sellars). Melanie waxa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda ku qaadatay ...
Ahmed Haaddi November 21, 2021